Febraayo | 2010 | WEEJIDOW | Baal 2
War Deg Deg ah: Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab oo guulo ka sheegtay dagaal ay sheegeen in ay la galeen Ciidamo taabacsan dowladda KMG oo ku sugan tuulooyin ku yaala Galgaduud
Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa waxa ay guulo ka sheegteen dagaal ay sheegeen in ay la galeen Ciidamo taabacsan dowladda KMG Soomaaliya oo ku sugan tuulooyin ku yaala gobolka Galgaduud.
Sida ay Waajidpress u sheegeen Saraakiil katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab dagaalkan maanta ka dhacay tuulooyinka Ris iyo Cagacade oo kamid ah tuulooyinka hoostaga degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud ayaa ahaa mid u dhaxeeyay Ciidmado ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab iyo ciidamo hubaysan oo ay sheegeen Saraakiisha Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab in ay taabacsanaayeen dowladda KMG Soomaaliya islamarkaana Doonyo looga qaaday gudaha magaalada Muqdisho dabayaaqadii Isbuucii tagay lana geeyay gobolka Galgaduud.
Dagaalka oo bilowday barqanimadii maanta sida ay sheegeen Saraakiisha Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa ka dhacay dhul howd ah oo u dhaxeeya tuulooyinka Ris iyo Cagacade, waxana dagaalkasi uu ahaa mid ay qaadeen Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab kadib markii sida ay sheegeen ay ka war heleen abaabulo Ciidan oo ay wadeen ciidamadaasi taabacsan dowladda KMG iyagoo intaasi ku daray in ay ku dileen weerarkaasi 2-kamid ah ciidamadii ay weerareen islamarkaana ay kula wareegeen hub faro badan sida ay sheegeen.
Saraakisha Xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in dhankooda aanay soo gaarin wax Khasaara ah islamarkaana goobihii lagu dagaalamay iyagu wali ay gacanta ku hayaan sida ay hadalka u dhigeen.
Majiro wax war ah oo kasoo baxay dhanka Dowladda KMG oo ku aadan dagaalka maanta ka dhacay tuulooyin hoostaga degmada Galhareeri ee gobolka Galaduud.
Dhanka kale Ciidamada Xisbada Wilaayada gobolka Banaadir ee Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa maanta howlgalo lagu burburinayo goobaha ganacsi ee ku yaala hareeraha Jidka Warshadaha ka sameeyay inta u dhaxeysa Ex Control Balcad iyo deegaanka Suuqa Xoolaha ee degmada Hiliwaa.
Ugu dambeyntii hareeraha Wadadaasi ayaa lagu arkayay Ciidamo badan oo taabacsan Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab, waxaana Saraakiil katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ay sheegeen in howlgalkaasi uu bilow u yahay dhismayaal Wilaayada Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ay ka samenayso wadooyinka magaalada Muqdisho.
Ilaa 13 ruux barakacayaal ah oo gaajo iyo haraad darteed ugu geeriyooday duleedka waqooyi bari Muqdisho
Ilaa 13 ruux oo ah dad ka barakacay magaalada Muqdisho ayaa gaajo iyo haraad darteed u dhintay maalmahii ugu dambeeyeay inta u dhaxeysa magaalad Muqdisho iyo degmada Warshiikh ee gobolka Sh/Dhexe sida ay sheegayaan qaar ka mid ah barakacayaasha iyo horjoogayashooda.
Jiinoow Maxamed Maxamuud oo ka mid ah horjoogyaasha dadaka ku barakacay deegnada Galgalato, Gubadleey,Ceelamaca iyo deegano farabadan oo u dhaxeeya magaalada Muqdisho iyo degmada Warshiiq ee gobolka Sh/Dhxe ayaa sheegay in 13 ruux ee gaajada u dhimtay maalmahii ugu danbeeyey 11 ruux ay isku jireen haween iyo caruur halka labada kalan ay ahaayeen Odyaal da,ah.
“Cago barar ayaa nahaya waxana ka so qaxnay Muqdisho dadku haraad iyo gaajo ayaa loo dhamaaday ,dadka dhintay labo waa odayaal inta kalena waxa ay isku jiraan haweeen qaar umal ahaa iyo caruur, sidaa waxa yiri Maxamed Maxamuud oo sheegay in wax gargaar ah aysan helin mudo shan bilood ah ee uu sheegay in halkaasu ay ku duagan yihiin .
Xaawo Xuseen Cali oo ka mid ah haweenka deeganadaasi ku bakarakacay ayaa sheeegay in mudada ay ku sugnaayeen deeganadaasi ay ku hoos nool yihiin geedo , waxa ayna sheegtay in haatan geedihi calamaha qorxda jirta ay ka daadisay haatana meelo banaan ah habenkii seexdaan.
“Sedex iyo tobon caruur ah ayaan dhalay waxaan mudo shan bilood ah hoos deganaa geed hoostiisa hada qoraxdii ayaa qalajisay celeemihii geedka oo hadda meel qorax ah ayaan maalintii jooganaa habeenkii dhaxan ayaan ina dishay” ayey tiri Xaawo Xuseen waxa ayna ugu baaqday hey’adaha Samalfalka iyo kooxaha Islaamiyintaba ee heysta deegnadaasi in gargaar ay u fidiyaan.
Qoysaskani oo tiro ahaan lagu sheegay in ay ka badan yihiin 5,000 oo qoys ayaa ka barakacay dagaaladii ugu danbeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwii dowlada Shariif ay la gashay kooxaha Mucaaradka, waxaana deegaanada qoysaskaasi ay ka barakaceen gacanta ku haya kooxaha mucaardka.
War Deg Deg ah: Askari ka tirsan Alshabaab oo Nabadoon ku dilay Shabellaha Hoose
Askari ka tirsan Xarakada Alshabaab ayaa Nin nabadoon ah shalay ku dilay duleedka deegaanka War-maxan ee Gobolka Shabellaha Hoose, iyadoo Nabadoonkan xilliga la dilayay uu weysa-qaadanayay.
Inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn ujeedada ka dambeysay dilka nabadoonka ayaa hadana warar qaar sheegayaan inuu muran dhex maray askariga dilka geystay iyo Nabadoonka.
Dadka deegaanka ayaa aad uga xumaaday falkan uu geystay gacan ku dhiiglaha, iyadoo aanay jirin cid ilaa iyo hada gacanta ku soo dhigtay, iyadoo markii uu dilayna uu si geesinimo leh u dhex mushaaxayay deegaankaas.
Ma jirto cid ka hadashay dilkan oo ka tirsan Maamulada Shabaab ee ka arimiya Shabellaha Hoose, waxaana dadka qaar ku eedeeyaan Al-Shabaab in ay askareeyaan caruurta yar yar oo ay qoryo u dhiibaan, kuwaasoo dadka marka ay isku dhacaan si bareer ah u dila.
Xiisada u dhaxeysa Xisbul Islaam iyo Shabaab oo cirka isku shareertay, kadib hadal kulul oo Xisbiga ka soo baxay.
Xiisada u dhaxeysa Xisbul Islaam iyo Xarakada Shabaab ayaa cirka isku shareertay, iyadoo haatan Xisbiga uu u muuqda mid go’aano cad cad ka qaadanaya hagar daamada Shabaab ku wadaan, kadib markii dagaalo looga saaray Gobolada Jubooyinka.
Xoghayaha Warfaafinta Xisbul Islaam Sheekh Maxamed Macalin ayaa ku eedeeyay Alshabaab in ay xagal daacin ku wadaan ururkiisa, waxaana uu tilmaamay in dagaalkii ka dhacay degmada Dhoobley ay mas’uul ka ahaayeen.
“Xarakada Shabaab ayaa mar walba xagal daacin nagu wada, dagaalkii Dhoobley inagaa ka dambeynay, habeenimadii jimcaha ayaa si caadi ah uga baxnay, taasna waxay qeyb ka tahay Ajandaha Xisbiga”ayuu yiri Sheekh Maxamed Macalin oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho.
Sheekh Maxamed Macalin ayaa sheegay in arrinta Jubooyinka ee iyaga iyo Shabaab ay haatan mareyso meel xun, waxaana uu tibaaxay in marar badan ay Shabaab la hadleen, hase ahaatee ay dhagaha ka fureysteen sida uu hadalka u dhigay.
Dagaaladii dhowaan ka dhacay Degmada Dhoobley ayaa ahaa kuwo uu hogaaminayo Axmed Madoobe oo horay Shabaabku ka itaal roonaadeen, hase ahaatee Xisbul Islaam ayaa u muuqda mid dagaalkii Dhoobley hal mowqif ah ka leh, waxaase la ogeyn halka ay ku dambeyneyso xiisada sii kululaaneysa ee labada dhinac u dhaxeeya.
Ahlusuna heshiis lama gelin dowladda labada Shariif “Warbixin”
Febraayo 20, 2010
Dowladda Labada Shariif ee Somalia ayaa faafisay war qabyaa oo ku saleeysan rabitaankeeda siyaasadeed kadib markii ergadda Shariif Sakiin iyo Culumadda Ahlusuna ku kala tageen shir uga socday Magaaladda Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Gudoomiyaha Ahlusuna Wal Jameeca Sheekh Maxamud Macalin Xasan oo kulanka Addis Ababa ka qeybgalayay ayaa beeniyay wararka ay faafisay idaacadda labada Shariif,kuna sheegatay inay heshiis la gashay Culumadda Ahlusuna Wal Jameeca.
Gudoomiyaha Ahlusuna wuxuu qiray inuu liis ay soo qorteen siyaasiyiinta ka socotay dowladda hasse yeeshee aysan aqbalin ergadda Ahlusuna Wal Jameeca.
Qorshaha siyaasiyiinta ka socday dowladda labada Shariif waxay ku cadeeyeen qoondeeyn ay ugu magacdareen awood qeybsiga Dowladda iyo Ahlusuna hasse yeeshee waxaa liiskooda ku qoraa shan Wasiir,shan Wasiir ku xigeen iyo sedex taliye ku xigeen,taas oo Culumadda Ahlusuna la yaab ku noqotay.
Websiteka Ahlusunna.org ayaa la soo dhigay Warbixin dheer oo lagu cambaareeynaa sheegashada dowlada labada Shariif ee la xiriirta in heshiis la gaareen Ahlusuna.Halkaan ka akhri
Idaacadda Codka Mareykanka ee VOA Somalia ayaa daabacday warbixin dheer oo ay uga hadleen awood qeybsiga dowladda iyo Ahlusuna hasse yeeshee waxaa xog ogaalnimadeeda ka marnaa inaysan aqbalin Ahlusuna Wal Jameeca.Halkaan ka akhri
Ahlusuna Wal Jameeca madaxdooda uma bukaan xil ay qabtaan,waxayna ku doodeen in xoreynta dalka ay ka muhiimsan tahay in wax lagu darsado Shariif Sakiin iyo Shariif la soo gemay.
Madaxweyne Shariif Sheekh Ahmed kulan uu Addis Ababa kula yeeshay Raisulwasarre Melles Zenawi ayuu ku balanqaaday inuu awood qeybsi rasmiya la sameeyn doono Xoogaga Ahlusuna laakiin sida muuqato hadalkaas wuxuu ku dhamaaday fashil,
Saraakiil ka tirsan Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa diblomaasiyiinta beesha Caalamka ku wargeliyay in dowlada labada Shariif ay hadalo xaqiiqada ka fog siiyeen Saxaafada madaxa banaan,taasna ay tahay mid fashileen wada hadaladii u socday Ahlusuna iyo dowladda.
Amiirka Al-Shabaab Sheikh Mukhtar Robow Al-Mansuur ayaa sheegey “”WFP kama shaqeynayso Soomaaliya iyadoo aan fulin ammarkii ahaa inay raashinka ka gadato beeraleyda dalka”
Amiirka Al-Shabaab Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abuu-Mansuur) ayaa ka sheegay Misaajid ku yaala Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Bay in Hay’adda WFP aysan ka shaqeynayn Soomaaliya iyadoo aan fulin amarradii lagu soo rogay.
Sheekh Abuu-Mansuur oo ah hoggaamiyaha ee Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin isagoo ku hadlayay afka MAY MAYGA ayaa sheegay in WFP ay ku soo rogeen amar ahaa inay ka iibsato gargaarka ay bixinayso beeraleyda Soomaaliya, haddii ay taas diidana aysan ogolaanayn inay dalka dib ugu soo laabato.
“Waxaa la leeyahay maxaa loogu diiday WFP inay dalka ka shaqeyso, inaguna waxaan leenahay waxay dhibaato ku haysaa beeraleyda Soomaaliya, ilaa ay aqbasho inay raashinka ka iibsato iyagana kama shaqeynayso dalkeenna” ayuu yiri Sheekh Mukhtaar.
Hogaamiyaha Al-Shabaab ayaa intaas ku daray in Hay’adda WFP ay doonayso inay kobciso dhaqaalaha Mareykanka oo ay raashinka kasoo iibso, ayna doonayso in beeraleyda Soomaaliya ay baabi’iso, taasoo uu sheegay inay Xarrakadu diidan tahay.
“Halkii loor ee galeyda ah ee laga soo iibiyo dalka Mareykanka wuxuu ku fadhiyaa 50-Dollar, mana ogola in qiimo intaas ka yar ay ka siiso beeraleyda Soomaaliya” ayuu yiri Abuu-Mansuur oo sheegay in beeraleyda Soomaaliya ay kobceen tan iyo markii WFP laga cayriyay Soomaaliya.
Abuu Mansuur ayaa tilmaamay in hay’adaasi inta ay raashinka ka keenayso wadamo ay ka mid yihiin Maraykanka islamarkaana ay cuna qabateynayso beeralayda Soomaaliyeed aysan ogolaan doonin in ay raashin keento goobaha ay gacanta ku hayaan Xarakatu Shabaabul Mujaahidiinta.
Sheekh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo ka mid ah hogaamiyaasha Xarakda AL Shabaab ayaa waxaa uu sidoo kale sheegay in beeralayda Soomaaliyeed ay heleen dhaqaalo farabadan tan iyo wixii ka dambeeyay markii hay’adda WFP ay ka baxday goobaha ay gacanta ku hayaan isagoona sheegay in laga maarmo hay’adaha wadamada Shisheeye wax ka keena sida hay’adda WFP.
Ugu dambeyntii Hogaamiye Sheekh Muqtaar Roobow Cali abuu Mansuur waxaa uu sheegay in hay’adda WFP raashinka ka soo iibsato Beeralayda Maraykanka ay loorkiiba ku soo iibsato $50 oo doolar islamarkaana ay diidanyihiin in beerlayda Soomaaliyeed ay kaga iibsadaan loorkii $10 oo Doolar, isagoo tilmaamay in ay ka warhayaan raashinka ay leedahay WFP oo maalmihii u dambeeyay ku xanibnaa Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Mid kamid ah la taliyayaasha ugu sareeyay Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo iscasilay
Mid kamid ah la taliyayaasha ugu sareeyay Madaxweynaha dowladda KMG ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa iscasilay kadib markii sida uu sheegay talooyinkiisa la qaadan waayay.
Profisor Axmed Maxamed Warfaa oo wareysi siidayay Idaacadda VOA-da ayaa sheegay in arimo shaqsiyadeed oo u gaar ah iyo dhowr qodob oo kale ay ku qasbeen in uu iska casilo jagadii uu ku magacownaa.
Waxa uu sheegay in madaxweyne Sheekh Shaiif Sheekh Axmed in aanu hirgalin talooyin dhowr ah oo uu soo gudbiyay, talooyinkaasina wuxuu ku sheegay in ay ka mid ahaayeen, in la yareeeyo tirada wasiiradda dowladda Soomaaliya, in la abuuro 5-nin oo lataliyayaal sare ah oo wasaaraddaha dowladda la taliyo, in dad Soomaali ah oo aqoonyahanno ah ay dowladda taladeedda ka qeybgalaan iyo in dowladda dhexe ay dhiirigaliso dowlad goboleedyo uu dalku yeesho.
Profisor Warfaa, wuxuu tibaaxay in sababaha loo tixgalin waayay talooyinkiisa ay ugu wacan tahay, iyadoo ay jireen ajandayaal kale oo badan oo madaxweynaha horyaalay.
Waxaa kaloo uu ka dhawaajiyay in ay jiraan lataliyayaal badan oo madaxweynuhu leeyahay, kuwaasi oo uu sheegay in isagu aanu ku qancin lataliyayaasha badan ee isdhinacyaacaya.
Profisoor Axmed Maxamed wuxuu ku tilmaamay waxqabad la’aanta dowladda in ay ugu wacantahay kooxaha badan ee dowladdu ka kooban tahay, sida Maxaakiintii, Barlamaankii xorta, Dowladdii hore iyo kuwo kale, wuxuuna tibaaxay in dhamaantood aysan lahayn mowqifyo isku mid ah.
Warfaa Mar uu ka hadlayay shaqsiyada madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa wuxa uu sheegay in Sheikh Shariif uu yahay shaqsi leh tixgalin iyo ixtiraam oo dadka si weyn u dhagaysta, balse wuxuu Prof Warfaa carabaabay in madaxweynuhu uu doonayo in uu qof walba qanciyo taasi oo uu xusay in aysan suurtagal ahayn oo madaxweynaha looga baahan yahay in uu qaato go’aamo ad-adag.
Naiorobi: Saraakiil Madaxtooyada Soomaaliya ka tirsan oo Nairobi u yimid si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ka dhanka ah Madaxweynaha
Febraayo 19, 2010
Saraakiil Madaxtooyada Soomaliya ka tirsan ayaa shalay socdaal ku yimid magaalada Nairobi ee dalka Kenya .
Socdaalka saraakishan oo ah ilaa lix sarkaal waxaa lala xiriirinayaa in Madaxweynaha Soomaliya uu soo diray si ay ula socdaan dhaq dhaqaaqyo siyaaasdeed oo ka dhan ah Sh. Shariif sida ay xaqiijiyeen mas´uuliyiin ku sugan Nairobi, waxaana wararku ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyadaasi ay wadaan Xildhibaano Barlamaanka ka tirsan iyo Safiirka Soomaliya ee Kenya Maxamed Cali Ameeriko.
Saaraakisha soo gaaray magaalada Nairobi waxaa ka mid ah Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Soomaliya C/qaadir Max’ed Cismaan Barnaamij, iyo Bashir Cadow oo isna ah madaxa dhaqaalaha Madaxtooyada .
Imaanshaha saraakishan waxaa ay dareen siyaasadeed sii galineysaaa xildhibaanada ku mashquulsanaa isbadaladi ka dhanka ahaa Madaxweynaha ee ku sugan Nairobi. walow maalmihii u danbeeyay Safiir Soomaaliya ee Kenya Max’ed Cali Ameeriko lagu eedeynayey inuu Diplumaasiyiinta reer galbeedka kaga dhaadhicinayey isbadal hogaanka dalka lagu sameeyo.Lamase oga waxa uu socdaalka saraakiishaan soo kordhin doono.
Qaramada Midoobay oo iska fogeysay eedeemo ay u soo jeedisay dowladda Mareykanka oo ku aadaneyd howlaha gar gaarka ee ay ka wado gudaha Soomaaliya
Barnaamijka Cunada Aduunka WFP ee Qaramada Midoobay ayaa iska fogeeyay eedeemo ku aadanaa in kaalmada bani’aadanimo ee loogu talagalay Soomaaliya ay u weeciso dhinacyada ka soo horjeeda Dowladda KMG Soomaaliya.
Better Somerton oo ah Afhayeenka hay’adda Cunadda Aduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP oo shalay shir jara’id ku qabtay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ayaa waxa uu iska fogeeyay in WFP ay u weeciso kaalmada bani‘aadanimada ee loogu tala galay Soomaaliya dhinacyada hubeysan ee ka soo horjeeda Dowladda KMG Soomaaliya xilli dowladda Mareykanka ay sheegtay in ay xayiraad ku soo rogeyso Malaayiin Doolar oo ay Barnaamijka Cunada Aduunka WFP ugu tala gashay in ay wax uga qabato xaaladaha bani’aadanimo ee haysta dadka Soomaaliyeed ee la daalaa dhacaya dhibaatada ka dhalatay dagaalada aan dhamadka laheyn iyo abaarah ka jira gudah dalka Soomaaliya.
Mr. Somerton ayaa waxa uu tibaaxay in WFP baaritaano ay samaysay ay ku ogaatay in aanay jirin waxyaabo cadeynaya in shaqaalaha hay’adaasi ay siiyaan raashinka mucaawanada ah ee Soomaaliya xoogaga hubeysan ee ka dagaalama wadanka Soomaaliya, isagoona dowladda Marayka ugu baaqay in xayiraadaasi uu ka qaado Barnaamijka Cunada Aduunka gaar ahaan lacagaha Malaayiinta ah oo ay ugu tal gashay wax ka qabashada xaaladaha dhinaca raashinka ah ee ka jira wadanka Soomaaliya.
Dhanka kale isku duwaha howlaha bani’aadannimda ee QM u qaabilsan dalka Soomaaliya Mark Bowden ayaa ku eedeeyay dowladda Mareykanka in siyaasad ahaan ay u fara gilineyso arimaha dhinaca aadanimada ee dalka Soomaaliya kadib wada Xaajoodyo dhex maray Qaramada Midoobay iyo Xukuumada Washington taaso ku aadaneyd sidii xayiraadda looga qaadi lahaa lacago Malaayiin Dollar oo ay Qaramada Midoobay u qoondaysay wadanka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee warbixino ay dhawaan soo saareen hay’adaha WFP iyo FAO oo ah hay’adda beeraha iyo cunada aduunka oo labaduba hoostaga Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ku sheegeen in 42% shacbka Soomaaliyeed ay u baahanyihiin kaalmo bani’aadanimo oo deg deg ah.
Xaalado Biyo la’aaneed oo aad u daran oo laga soo sheegayo deegaano hoostaga gobolada Bay iyo Bakool.
Febraayo 18, 2010
Xaalado Biyo la’aaneed islamarkaana aad u daran ayaa xiligan waxaa laga soo sheegayaa deegaano dhowr ah oo hoostaga gobolada Bay iyo Bakool.
Kadib markii Sanadihii ugu dambeeyay wax roobab ah aanay ka da’in deegaano iyo degmooyin katirsan gobolada Bay iyo Bakool ayaa iminka qeybo badan oo kamid ah gobolka Bakool waxaa ka jira biyo la’aan tii ugu xumeyd oo soo martay deegaanada Gobolkaasi.
Degmooyinka Tiyeegloow, iyo Waajid oo kawada tirsan gobolka Bakool ayaa dadka ku dhaqan waxa ay ka cabanayaan biyo la’aan xoogan iyadoona dhamaan Ceelashii Biyaha ee ku yiilay magaalooyinka qaarkood ay biyo yareeyeen.
C/qaadir Aadan Xasan oo kamid ah dadka ku dhaqan degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool oo Idaacada Shabelle u waramayay ayaa waxa uu sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa ay isasoo tareyso biyo la’aanta ka jirta qeybo badan oo kamid ah gobolka Bakool isagoona intaasi ku daray in dadka ugu daran ee biyo la’aanta haysato ay yihiin dadka ku jira xerooyinka ku yaala degmada Rabdhuure iyo kuwa deegaansanaya meelaha ka fog fog magaalada.
Sidoo kale Odayaasha iyo Waxgaradka ku dhaqan gobolka Bakool ayaa waxa ay codsadeen in dadka gobolkaasi ku dhaqan oo biyo la’aanta xun ay haysato lala soo gaaro booyado biyo ah si noloshooda loo badbaadiyo, hadii taasi aanay dhicin waxa ay sheegeen Odayaasha in xaalada biyo la’aaneed ee gobolada Bay iyo Bakool ka jirta ay ka sii dari karto sida ay hada tahay.
Ugu dambeyntii Cabashadani xoogan ee ka soo yeeraysa dadka ku dhaqan magalooyinka qaar ee gobolada Bay iyo Bakool ayaa waxa ay imaanaysaa xilli goboladaasi horay ay u soo mareen xaalado abaareed oo ilaa iyo iminka ay raadkooda ka muuqdaan halkaasi.